Rio de Janeiro - I LOVE RIO- ezemidlalo
Cariocas ukuthanda ezemidlalo - kusuka ibhola paragliding, futhi konke phakathi. Njalo beach, ihlathi nomzimba amanzi in Rio de Janeiro kufakazela iqiniso lokuthi Cariocas kukhona phakathi ngikhuthazela uthando-emcimbini kanye ezemidlalo kanye imfanelo.
I LOVE RIO ichaza ukuzilibazisa yezemidlalo ezintabeni, amabhishi, ulwandle kanye nomoya, nokunikeza iseluleko namathiphu okuthi ungawusebenzisa kanjani ukuba ahileleke, kanye izindaba elithakazelisayo namathiphu alusizo. Ezemidlalo Professional futhi ethandwa ezihlanganisiwe eceleni ukuthambekela yanamuhla efana nokunensa-lining kanye isigwedlo ume-up, kanye ulwazi Kuzonyuka, amakilasi, amaqembu endawo, gyms kanye nemicimbi yokuncintisana.
EZIHLUKILE KAKHULU gym yasemadolobheni emhlabeni
Ukuba umuzi libalele ubusiswa ngomkhulu sezulu esifudumele, Rio de Janeiro yiyona ndawo ephelele ukuthuthukisa okuqinile ezemidlalo isiko, njengoba abantu basondela ukuba emigwaqweni lokushisa elilungile. Izinsuku Sunny, ukushisa, futhi khathizwe blue wadala isiko ngokujulile ongaphandle, lapho ezemidlalo kanye nemisebenzi indima ebalulekile ekuphileni kwansuku edolobheni.
emabhishi ukubhukuda, yamahlathi izintaba, nasezintabeni ukugibela ukwenza Rio de Janeiro omunye enkulu, kumnandi kakhulu, ezihlukahlukene kakhulu, ezivulekile gyms in the world. Imicimbi yezemidlalo kulo lonke idolobha kukhona ekahle Cariocas ukuhlanganisa passion yabo ngemidlalo kanye predilection zabo ukuzijabulisa nabanye futhi umbukwane ezinkulu.
Abantu babo bonke ubudala ukubutha ogwini emabhishi eziningi, imini nobusuku, udlala zonke uhlobo ezemidlalo - Surf, beach ibhola, ibhola volley, unyawo volley, yokuzijwayeza, ukugijima, ngisho nesisindo-izinsimbi, uma sibala ezimbalwa. Intsha ufunde lezinyawo yonke ogwini lwalesi siqhingi, ngenkathi abadala ukujabulela gyms free futhi sivivinyo amakilasi ngezilokotho sakhona omuzi.
Amanzi Blue amandla emini, futhi mesmerize ekushoneni kwelanga - njalo ekwamukeleni Surfers, umzimba boarders, ababhukudi, futhi ababhukudi. The Sands ezimhlophe eziyikhulu ogwini uzizwe njengo velvet lapho udlala volley, beach volley, Umfanekiso ibhola, beach ibhola, futhi sonke isikhathi intandokazi sport "altinha." Rio sika
emahlathini green yasemadolobheni kukhona ekhaya izimpophoma ezinhle, amachibi ezincane, futhi emizileni edabula ezinye yezinto eziphilayo ezicebe emhlabeni - ocebile flora, nezilwane, kanye emagumbini ongenakulibaleka Atlantic Rainforest. Amachibi futhi amachweba ukubonakalisa skyline, futhi echazwa izindlela wenza nje ngebhayisikili, ngezicathulo, ukugijima, futhi egijima - kungabikho nezinye nakuba kuka okwamanje uqobo.
Emagqumeni nasezindaweni ezinamadwala umeme rock-bezintaba ukuze uthole ilungelo ukubukwa ebukeka emangalisa, iziqhingi, futhi amacala eyingqayizivele emzini ngezansi. Peaks evulekile njalo futhi okusezingeni ukunikeza lokujabulela flight - uma uhamba, noma onesibindi gxuma kanye hang glide eduze izinyoni ezishisayo abanamakhamera esibhakabhakeni of Rio.
Njengoba isikhala yomphakathi wentando yenengi, amabhishi Rio are ekahle abantu abavela kuzo zonke izizinda zenhlalo namakhono ukuze beze ndawonye futhi ujabulele zemidlalo ukuzilibazisa . Engafuni umane ukuhlala futhi zithola khona ilanga lihlaba, iningi Cariocas baya lwekucocisana asebenzayo more and mobile nendawo yabo futhi baye babhekana futhi izindlela eziningana sports ezahlukene ukuthi kukhona ephelele sezwe sandy.
Enye sport okuyinto udlalwa cishe wonke beach in Rio, kungakhathaliseki ubukhulu kanye emayelana, kuyinto "Futebol de areia," noma beach soccer. At emabhishi emikhulu, ezifana 'Praia do Flamengo, "futhi ezindaweni eWestern Zone of Rio, zikhona amanetha futhi izingxenye isihlabathi elalinikezelwe ukuzilibazisa. Altinha, noma "little omkhulu," kuyinto umdlalo lapho Soccer uphasile emoyeni phakathi tindilinga abadlali, usebenzisa izinyawo, amathole, amadolo, amahlombe futhi ikhanda. Umthetho osemqoka - ukuthi ibhola uhlala eboshiwe ngaso sonke isikhathi air - eboleka mdlalo igama layo.
Enye sport lodumo kuyinto Volleyball nezinkantolo ingatholakala abami ngasebhishi cishe yonke emabhishi emzini, lapho ochwepheshe kanye nayizimfundamakhwela beze ukubukisa futhi ucije amakhono abo.
Kukhona okunezinhlobonhlobo eziningi yezemidlalo amanzi-based lapho Cariocas nezivakashi zithuthelekela ogwini Rio for. Ababhukudi babuthane amaqembu mass abhukude nemincintiswano, kanti Surfers nomzimba-boarders thatha anolaka, amanzi ahlanzekile endaweni Barra da Tijuca, nasemaveni amshiya lowa ukuba Recreio eseduze - kanye emabhishi nemfashini of the izifunda of Copacabana, Ipanema futhi Leblon.
Okwamanje, Paddle Stand-Up iyona imfashini ukuzilibazisa amanzi Rio: a sport ukuthi kuhilela emi ebhodini ngesikhathi usebenzisa isigwedlo ukuba zitshuza amagagasi. Umsebenzi unikeza umsebenzi elinokuthula ephelezelwa imibono eyingqayizivele landscape olungokwemvelo, okulula ukuzijayeza futhi kujabulise on emachibini amachweba.
Ayisekho ezihambisana nesiko umakhonya kanye sihlubuki of the 70s and 80s, Surf standard namanje uhlala kuyingxenye ebalulekile counterculture Rio sika - wakhula a okulandelayo enkulu ngenxa emabhishi langa likhungethwe umuzi. Amaqembu surfing Local achithe isikhathi futhi imizamo ukudala imincintiswano ukuletha ndawonye emanzini Champions zikazwelonke nezamazwe ngamazwe kanye emabhishi Rio odumile.
emabhishi bamele omunye ukukhangwa Rio esiyinhloko turky, futhi abantu bendawo balisebenzise esikhulu kubo. Nokho, lezinyawo ine okulandelayo esiphezulu kule jikelele Carioca ezemidlalo isiko - ngokujulile endleleni ezingqondweni zabantu, selukhulile ukuba abe yingxenye yokuphila kwansuku zonke. It iyona sport baziswa kakhulu eBrazil, futhi Rio de Janeiro iyathinteka.
Soccer ine isici esikhethekile sokunqoba umehluko social, futhi ingadlalwa nje mayelana kuphi - mhlawumbe esenza yaduma kakhulu emhlabeni wonke njengoba wenza. Empeleni, ngo favelas kanjalo nedlelo layo zikanokusho, izenzakalo main yezemidlalo kugxile kulo.
Soccer bekulokhu kuyingxenye enkulu isiko Brazilian kusukela ukufuduka yayo besuka eNgilandi ngo 1894. Futhi ingxenye isizathu ukuthandwa lo mdlalo kanye lisetulu iqiniso ukuthi kakhulu kufinyeleleke, futhi ingadlalwa ezahlukene zokusebenzisa. Cariocas kuyabonakala honing amakhono abo kanye ibhola ngaphesheya komuzi, kusukela amabhishi yayo sandy ezindleleni umhubhe of the favelas.
Rio siyikhaya ezinye namaqembu ebhola kakhulu owaziwa futhi wasekela Brazil, ogama imidlalo liba at the yisakhiwo sodumo Maracanã inkundla unyaka.
Kukhona Imiqhudelwano eziningana ukuthi Cariocas ukulandela, ubambe imifelandawonye inkanuko namaqembu ahlukahlukene. I "Campeonato de Futebol Carioca," noma Carioca Soccer Championship, iyona Rio de Janeiro isimo ukuncintisana, lapho obelokhu ngaphansi omunye ebe ethi noma enye kusukela 1906. Amaqembu ethandwa futhi impumelelo kukhona Flamengo, Botafogo, Vasco futhi Fluminense.
Indebe kazwelonke ebaluleke kakhulu ngokuthi "Campeonato Brasileiro," noma Brazilian Championship, eyaziwa njengoba "Brasileirão," obadalwa ngo 1959 futhi has ukwahlukana ezine. I "Copa do Brasil," noma Brazilian Cup, yasungulwa ngo-1989, futhi inombolo enkulu amaqembu emele elikhulu cross-section ithi kuleli lizwe. Champions of zombili lezi imincintiswano kazwelonke okuqinisekisiwe endaweni in the "Copa Libertadores da América," noma Liberty Cup of America.
Soccer sika beach okufana useyinto ethandwa ikakhulukazi, idolobha lokukhonza njengenceku kwesiteji enhle imincintiswano eminingi international.
Sendawo Rio ezihlukahlukene ngokumangalisayo futhi landscape ikufanele anhlobonhlobo zemidlalo. The amahlathi, nezintaba zinikeza amathuba olukhulu izintaba, ekhuphuka nokukhuthazela ezemidlalo.
Along emapaki, ephawuleka kunazo on the 'Aterro de Flamengo, "noma Flamengo Park, uquqaba abagijimi, tight-rope ahamba, isisindo-lifters, skaters nangamabhayisikili babuthane ukubonisa amandla abo futhi ujuluke away ukucindezeleka of the day. Iphelela Competitive ihlelwe njalo kulo lonke idolobha makuqoqwe swathes enkulu imfanelo abathanda.
Capoeira iwuhlobo art nezemidlalo lapho ihlanganisa combat, dance, umculo kanye play and wenziwa ukuba silokhu sithi futhi eshaywayo. It yadalwa ekuqaleni kwekhulu le-16 izinceku Brazilian amagugu Afrika, njengendlela indlela masking amasu ukulwa ngokufihla nabo dance uhamba. Ngasekupheleni kuka-2014 sanikwa UN isimo amagugu amasiko.
Gyms Private futhi amaqembu ezemidlalo kuvame, ukuhlinzeka anhlobonhlobo imishini futhi amakilasi ukwanelisa zonke imfanelo ukunambitheka. Umuzi ngokwaso ikhuthaza yokuphila asebenzayo ukuba izakhamuzi zayo, ngokusebenzisa ukukhangisa imikhankaso siphakamise ukubaluleka Rio njengoba ithuluzi eliyigugu ukuze uhlale uphilile.
Kwamenywa gyms zomphakathi asebekhulile ezibekwe yedolobha e eziningi amapaki, izingadi, ngisho ogwini lwalesi siqhingi: uhulumeni imali ngempumelelo nempilo zemidlalo imizamo ukuthuthukisa imfanelo ka labantu bayo, bemisa khulula gyms ongaphandle nomzimba izisindo amapaki kanye nemiphakathi, ukukhuthaza kanye nokwandisa ukufinyelela zokuzithokozisa imfanelo mkhuba.
Rio de Janeiro yiyona idolobha elikhulu, edlulisela ngokusebenzisa indawo amakhilomitha square kuka 4400 zakhelwe eceleni beach, kanye amachweba eziningi, futhi eduze namagquma fabulous, amahlathi, nendlela rocky - So, akusona isimanga ukuthi ngamabhayisikili okungaka baziswa phakathi Cariocas, futhi isimo uye wakha engaphezu kuka-360 amakhilomitha ezisemadolobheni bike izindlela, eziningi zazo ukuwela ezinye ukubukwa athandwayo kakhulu emzini nezindawo ezizungezile.
Njengoba eminye imidlalo kukhona okukhulu ukubukela, ziba izenzakalo ezibalulekile turky - volleyball, yachting, motor wokugijima, karate, jujitsu, futhi capoeira njalo zidonse ukunaka kwanoma Cariocas kanye nezivakashi.
Namuhla, Rio de Janeiro ubhekwa dolobha yezemidlalo zomhlaba - ukudlala impi kuya Izingonyama zensikazi of international ezemidlalo ukuncintisana, kanye nokunikeza evundile kugeleza izenzakalo kanye nemisebenzi.
Ukuze sivume ukuzibophezela Rio ukuba yezemidlalo futhi imfanelo, umuzi wadlala aphethe ongenakulibaleka ukuba Cup World in 2014 futhi wakhethwa njengoba yesehlakalo for the ehlonishwa kakhulu Olympic Games ka-2016 Umuzi isingathe Rio Sport Show wonyaka, a kahle imishini wezemidlalo, amasevisi, gyms futhi amaqembu.
In 2015,isimo sabamba eziningi enkundleni yezemidlalo ukuze bakhumbule unyaka Rio sika 450th of khona, kuhlanganise iphelela eside, futhi nethuba ulinge 14 ezemidlalo nokungcebeleka izenzakalo ehlukene phesheya chibi phakathi distrcits of Leme futhi Recreio dos Bandeirantes.
Njalo ngonyaka, lomuzi isingathe World Championship of capoeira, okuyinto ezuzisa kusukela iqhaza emazweni seventeen. Umncintiswano unikeza capoeira abaculi ithuba sikhangise amathalente abo ukuze izilaleli ebanzi, futhi zithola kakhulu kwafunwa ukuqashelwa international.
I "Desafio da Paz" (Challenge Yokuthula) zinemibala izenzakalo ezenzeka esikhathini backstreets of favelas Rio sika nendlalifa kakhulu, ebesihlelwe umhlaba wonke Grupo Cultural Afroreggae (Afroreggae Cultural Group).
The Desafio da Paz isibe ingxenye omazisayo yezemidlalo ikhalenda leli dolobha, ibamba ezihlukahlukene izenzakalo emiphakathini yonkana namaphethelo. Isisekelo iphrojekthi yisifiso ukukhuthaza ukuthula kanye nezithelo zamasiko zemidlalo ukuthi imvelo elinokuthula social unikeza.
A popular zemidlalo ukuzilibazisa nesuka ku favelas kuyinto kite-ezindizayo. Izakhamuzi Abancane nabadala wachitha iminyaka siphelelise ubuciko wokwakha Kites futhi beqhuba imincintiswano esibhakabhakeni.
Rio de Janeiro libalele futhi afudumele, ngokwemvelo ngokumema aphume abenza ezemidlalo - isimemo emzini esifinyelela emhlabeni wonke ukuba bonke abafisa ukudlala.
Imicimbi yezemidlalo kulo lonke idolobha kukhona ekahle Cariocas ukuhlanganisa passion yabo ngemidlalo kanye predilection zabo for nabangane kanye umbukwane ezinkulu.
Namuhla, Rio ingenye izihloko zemidlalo zomhlaba - ukudlala impi kuya Izingonyama zensikazi of international ezemidlalo ukuncintisana, kanye nokunikeza evundile kugeleza imisebenzi esibandakanya. Njalo ngonyaka, umuzi Kuqhutshwa eziningi imicimbi, esukela isikali kusukela wendawo omhlaba. I LOVE Rio ubheka emisebenzini ezungezile kokubili kakhulu obekulindelekile kanye yabadobi wendawo imincintiswano, kuhlanganise okuqeqeshwa zomphakathi, izinhlanga wokulungiselela, futhi amathuba balwe.
Mqhudelwano futhi Imiqhudelwano
Amaklabhu wokuzivocavoca Khulula